घरमा बगैंचा, करेसाबारी बनाउनुभएको छ ? तपाईंका स्वास्थ्य, सक्रियता र खुसीसँग जोडिएका छन् - ज्ञानविज्ञान
तपाईंको घरमा बगैंचा छ ? बगैंचामा फूलहरु फुलाउनु भएको छ, वनस्पति हुर्काउनुभएको छ ? करेसाबारी बनाउनुभएको छ ? सागसब्जी रोप्नुभएको छ ? बार्दली, छतमा फूल वा तरकारी फलाउनु/फुलाउनुभएको छ ?
आफ्नै बगैंचा वा करेसाबारीमा सागसब्जी रोप्नुभएको छ भने तपाईं बजारमा निर्भर भइरहनु पर्दैन । अहिले त्यसैपनि बजारमा उपलब्ध सागसब्जी शुद्ध र स्वस्थ्यकर छैन । विषादीको प्रयोगले ति खान लायक छैनन् । सागसब्जीसँगै हामी विष पनि सेवन गरिरहेका छौं । त्यसैले बजारमा मात्र आश्रति भइरहनु भनेको शरीरलाई रोगी पनि बनाउनु हो । अतः आफ्नै घरबारी, बगैंचा, करेसाबारी, छत, बार्दलीमा किन सागसब्जी नरोप्ने ?
तपाईंले रोपेका सागसब्जी उम्रन थाल्छन्, कोपिला लाग्न थाल्छ, फूल फुल्न थाल्छ, फल लाग्न थाल्छ । सागसब्जी हुर्कन थाल्छ । यी सबैकुरा ख्याल गरिरहँदा तपाईंमा एक किसिमको उत्साह पनि जाग्छ । आफुले रोपेका सागसब्जी, फलफूल उमि्रएको र फलेको देख्दा तपाईं प्रफुल्लित रहनुहुन्छ ।
Don't Miss it आज एउटा नयाँ सुरूवात हाे – एक जीवन उपयाेगी भनाइहरू
Up Next औषधीय गुण बाेकेकाे हुन्छ पालुंगो सागले, जान्नुहाेस् यसकाे फाइदाबारे